विनोद चौधरीको ओठतालु सुक्नेगरी केपी ओलीले सोधे एउटा प्रश्न ! – GALAXY
विनोद चौधरीको ओठतालु सुक्नेगरी केपी ओलीले सोधे एउटा प्रश्न !
धनाढ्य विनोद चौधरीलाई नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले असिनपसिन हुने प्रश्न सोधेका छन् । ओलीले विश्वको धनीको सूचीमा परेका मान्छे नेपालमा कर तिर्नेको सूचीको १० नम्बरमा पनि नपर्नु दलाल पूँजीको असर भएको बताएका हुन् । ओलीले भने, ‘विश्वका धनीको सूचीमा परेका मान्छे नेपालमा कर तिर्नेको सूचीको १० नम्बरमा पनि किन पर्दैन ?’
अध्यक्ष ओलीको यो भनाई उद्योगपति विनोद चौधरीप्रति लक्षित हो । चौधरी ग्रुपका मालिक चौधरी विश्वका अर्बपतिहरुको सूचीमा छन् । विश्व प्रसिद्ध म्यागेजिन फोर्ब्सले सार्वजनिक गरेको धानाढ्यहरूको ४५ औं वार्षिक सूची अनुसार गत वर्ष चौधरी २१४१ स्थानमा थिए ।
दुई वर्ष लगातार उनको वार्षिक धन १.४ अर्ब अमेरिकी डलर छ । सन् २०१९ मा उनको धन बढेर १.७ अर्ब डलर पुगेको थियो । सन् २०१७ बाट उनको सम्पत्ति बढ्न थालेको हो ।
उद्योगपति चौधरीले सन् २०१३ मा पहिलोपटक फर्ब्सको विश्वका अर्बपतिहरूको सूचीमा प्रवेश गरेका हुन् । पछि उनको राजनीतिमा सक्रियाता समेत बढ्दै गयो । विनोद चौधरी प्रतिनिधी सभामा नेपाली काँग्रेसका संसद् समेत हुन् ।
फोर्ब्सका अनुसार चौधरीको आम्दानीको प्रमूख स्रोतका रुपमा नबिल बैंक, चौधरी ग्रुप अन्तर्गत देशदेखि विदेशसम्म रहेका उद्योग, रेस्टुरेन्ट र होटलहरु रहेको जानकारी दिएको छ।
चौधरीको प्रमुख आधार र लगानी नेपालमा नै हो । तर चौधरी विश्वको धानाढ्यहरूको सूचीमा परे पनि नेपालमा भने कर तिर्नेको सूचीमा छैनन् । गत वर्षको रेकर्ड अनुसार नेपालमा व्यक्तिगततर्फ सिद्धार्थ शमशेर जबरा, संस्थागत तर्फ ठूलो करदाता सूर्य नेपाल प्रालि, निर्यातकर्ता तर्फ डाबर नेपाल छ ।
‘कालो धन सेतो बनाउन जनार्दन दलालका प्रतिनिधि भएर निस्केका छन्। अध्यक्ष ओलीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘कालो धन सेतो बनाउन जनार्दन दलालका प्रतिनिधि भएर निस्केकेको बताए ।
भने, ‘ कालो धन सेतो बनाउन प्रचण्ड–माधव लागेका छन् । जनार्दन शर्मा दलालका प्रतिनिधि भएर निस्केका छन्। अहिले ‘ब्युरोक्र्याटिक कम्प्राडर’ को बिगबिगी भयो ।’